Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. किर्तिपुर नगरपालिकाले पीसीआर ल्याब सञ्चालन ल्यायाे – Emountain TV
काठमाडाैं,२३ असार । कोराना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेपछि परिक्षण गर्न देशभर पिसिआर ल्याबको अभाव भईरहेको अवस्थामा किर्तिपुर नगरपालिकाले पीसीआर ल्याब सञ्चालन गरेको छ । किर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिवि बायोटेक कोरोना परीक्षण सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन । देशभर पीसीआर ल्याबको अभावको कारण परीक्षणको दायरा बढ्न सकेकाे छैन । कोरोनाको परीक्षण गर्ने कतिपय अस्पतालहरुमा पीसीआर किटको अभावले परीक्षण नै बन्द हुने सम्मको अवस्था छ । कोरोना संक्रमितको संख्या दिनुहुँ बढिरहेको अवस्थामा स्वाब परीक्षणमा सहज होस भनेर किर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिवि बायोटेक कोरोना परीक्षण सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गरेर आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा किर्तिपुर नगरपालिका र त्रिवि लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्रले ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको हो । विश्वविद्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायको समन्वयमा सञ्चालित ल्याब गुणस्तरीय हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नसकिएसम्म ल्याबले सेवा दिने बताईएको छ । पहिलो चरणमा निश्चीत समय तोकेर सेवा प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार चौविसै घण्टा सेवा दिइनेछ ।
पर्याप्त पीसीआर ल्याब नहुँदा अझै पनि कोरोना संक्रमितको स्वाव परीक्षणमा समस्या भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ल्याब सञ्चालनको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।
कोरोना भाइसरबाट संक्रमित हुनेको संख्या २० हजार ७ सय ५० पुग्यो
अस्पताल सिल गरिएको १२ दिनपछि पुनः सञ्चालनमा
भौतिक दूरी कायम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे आग्रह
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक करोड ८२ लाख नाघ्यो